‘म बाँचुञ्जेल बुढो हुन्न’ - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७१ जेठ २७ गते ०:११
बेला बेलामा युवतीसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आउने अभिनेता भुवन केसी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने खबरले चर्चामा आए । फिल्मनगरीमा ‘सदाबहार’ अभिनेताको भनेर सम्बोधन गरिने अभिनेता केसीसँग कुराकानी:
फिल्म नगरीमा हिट मानिने तपाईं राजनीतिमा त फ्लप हुनु भयो नि !
म कुनै विज्ञ राजनीतिज्ञ होइन । देश र जनताको लागि केही गरौं भनेर एमाले पार्टी प्रवेश गरेको हुँ । पार्टीले पनि कलाकारको इज्जत गर्दै संविधान सभा निर्वाचनको लागि उपलब्ध गराएको हो । समानुपातिक सभासदको तालिकामा पनि मलाई राखेकै हो । तर, प्राविधिक कारणले म पर्न सकिन । तर, कुनै पनि पार्टीले कलाकारलाई सम्मान गरेर टिकट उपलब्ध गराउनु नै ठुलो कुरा हो ।
तपाईंलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासदको सुचीमा नराख्न एमाले पार्टी तथा नेताकै बिरोध थियो भनिन्छ नि ?
संसारमा कसैको पनि बिरोधी हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मलाई चाहिं बिरोध गर्नका लागि बिरोध गरियो । तर, मलाई सहयोग गर्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो ।
काजोल फिल्मस्ले ‘ड्रिम’ नामक फिल्म बनाउँदै छ । यो फिल्मको म आफैंले निर्देशन गर्दैछु । छोरो अनमोलले लिड रोल निभाउँदैछ । यही त हो फिल्मको गीत रेकर्डिङ, स्क्रिप्ट फाइनल र कलाकार छनोटको काममा व्यस्त छु ।
आफ्नो फिल्मको हिरो त छोरोलाई पो बनाउन लाग्नु भएछ । भनेपछि भुवन केसी अब बुढो भएको हो ?
कलाकार कहिल्यै बुढो हुँदैन । जति उमेर बढ्दै गयो कलाकारमा त्यती नै परिपक्वता बढ्दै जान्छ । यो फिल्मको कथा नै टिनेजर्स लभ स्टोरी भएका कारण छोरोलाई अभिनय गराउन लागेको हुँ । भुवन केसी बाचुञ्जेल बुढो हुँदैन ।
‘साथी म तिम्रो’ पछि फिल्म निर्माणमा ब्याक हुन काजोल फिल्मस्लाई धेरै वर्ष लाग्यो । किन ?
काजोल फिल्मस्ले २३ वर्षको अन्तरमै फिल्म निर्माण गर्दै आएको छ । हामी सोचेर मात्रै फिल्म बनाउँछौं । उत्कृष्ट स्क्रिप्ट, दर्शकको मन जित्ने र राष्ट्रलाई नै सन्देश दिने फिल्म बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
‘साथी म तिम्रो’ले सोचे अनुसारको व्यापार गर्न नसकेपछि फिल्म निर्माणमा ढिलाइ गर्नुभएको हो ?
म्यारोडोनाले फुटबल खेलमा सधैं खोल गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, उसको खेल जहिल्यै उत्कृष्ट हुन्छ । नारायण गोपालले गाउनु भएको सबै गीत पनि उत्कृष्ट छैनन् । तर, नारायण गोपालले गाएका तर नचलेका गीत पनि अरुले गाएको भन्दा उत्कृष्ट छन् । त्यसैले म दावाकासाथ भन्छु अरु ब्यानरले बनाएको फिल्म भन्दा स्तरिय र गुणस्तर फिल्म काजोल फिल्मस्ले बनाउँछ । व्यापारमा ‘अप्स एण्ड डाउन’ त भैहाल्छ नि ।
तपाईंको दुई वटै बैवाहिक सम्बन्ध दिगो रहेन । किन ?
म लाखौं नेपालीको प्रिय कलाकार भएँ । तर मेरा श्रीमतीहरुसँग त्यती राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । यसबाट म आफैं अपसोच छु । मेरो प्रयास बैवाहिक सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने थियो, तर भएन । यसलाई पनि म जीन्दगीको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिन्छु ।
बैवाहिक सम्बन्ध दिगो नहुनुमा आफू केमा चुके जस्तो लाग्छ ?
आफ्नो तर्फबाट म केहीमा पनि चुके जस्तो लाग्दैन । म सबैलाई राम्रो होस् भन्ने सोच्दछु । बिहे कसैले पनि बिछोड हुन्छ भनेर गर्दैन । तर, समय, विचार, संस्कृति नमिलेपछि सँगै बस्नु भन्दा एक अर्कासँग छुट्टिएर बस्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामी एक अर्काबाट छुट्टिएका हौं । सुस्मिताजी (दोश्रो श्रीमती) सँग मेरो कानुनी रुपमै सम्बन्ध बिच्छेद भैसक्यो । हामीबिच कुनै खालको सम्बन्ध छैन । तर, पनि म उहाँको भलो चाहने व्यक्ति हुँ ।
पहिलो पत्नीसँग चाहिं तपाईंको सम्बन्ध कसरी टाढियो नि ?
सुरुदेखि नै उहाँ आफ्नो व्यवसायमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ सन्तान सहित अमेरिकामा हुनुहुन्छ । आ-आफ्नो व्यवसायको कारणले गर्दा हामी छुट्टिएका हौं । उहाँसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो छ । हाम्रो मनको दुरी बढेको छैन । हामी अहिले पनि सम्पर्कमा छौं ।
फेरि श्रीमती भित्र्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो झुठो हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । यदि त्यस्तो हो भने म सबैलाई जानकारी गराउँछु । यो कसैको मनगढन्ते कहानी मात्रै हो । तेश्रो बिहे गर्ने मेरो सोच छैन । म अहिले राष्ट्र र फिल्म क्षेत्रको लागि मात्रै सोच्दैछु ।
तपाईंको नाम किन बढी युवतीसँग जोडिएर आउँछ ?
म एकदमै ‘फ्रेन्ड्ली’ छु । म सबै उमेर समुहसँग मिल्छु । तर, एउटा स्टार कलाकार कुनै युवतीसँग हिड्दा बोल्दा चाहिं त्यसलाई विभिन्न कोणबाट हेरिन्छ । यसलाई म सहज रुपमै लिन्छु । अहिलेसम्म आएका सबै समाचार मनगढन्ते कहानी मात्रै हुन् ।
नायिका जिया केसीसँगको सम्बन्ध चाहिं के हो त ?
कसैले म माया गर्छु, मन पराउँछु भन्नु मेरो लागि खुसीको कुरो हो । उहाँलाई म मन परेको हुन सक्छु तर हामी बिच त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन ।
केही नपाकेरै त कसरी गन्ध आउँछ र ?
स्टारहरुको लाइफमा यही त फरक छ नि । कोहीसँगको सामान्य भेटघाटलाई पनि शंकाले हेर्ने गरिन्छ ।
यस्तो समाचार आउँदा फ्यानप्रति असर पर्छ भन्ने लाग्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म म्यारोडोना र नारायण गोपालको फ्यान हुँ । म्यारोडोनाले गोल गर्छ कि गर्दैन ? भन्दा पनि म उसको खेल हेर्छु । म उसको व्यक्तिगत जिन्दगीमा जान चाहन्न । उसले जाँड र रक्सी के खान्छ मलाई त्यसको मतलब हुँदैन । त्यसैले मेरा फ्यानलाई पनि मेरो व्यक्तिगत प्रसंगले केही असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अन्त्यमा, तपाईंको अमेरिकाको यात्रा बारे बताइदिनुस् न ।
जुलाइको २५ तारिखमा छोरा र छोरीलाई भेट्न म अमेरिका जाँदैछु । पारिवारिक भेटघाटसँगै होम प्रोडक्सनको फिल्म ‘साथी म तिम्रो’लाई अमेरिकाको न्यूयोर्क र बोस्टनन शहरमा देखाउने कार्यक्रम छ । करिब डेढ महिनाको अमेरिका बसाइ पछि नेपाल फर्केर मेरो ‘ड्रिम’ फिल्मको छायाँकन सुरु गर्छु ।
मध्यावधि निर्वाचन गराउन कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.महतको माग
लडाकुको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारमै छः सूर्य थापा
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा के-के भने ? (हेर्नुस् पूर्णपाठ)
थप दुई साता लकडाउन लम्बिने संकेत
इटहरीका मनकारी युवा नेता र व्यावसायीले राहतका लागि दिए स्थानीय सरकारलाई आर्थिक सहयोग
हतियारसहित नेपाल छिरेको भारतीय गाडी नियन्त्रणमा, गाडीमा भेटियाे वडाध्यक्षको एटीएम
नेकपा सचिवालय बैठक : सरकारको काम सकारात्मक, अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
कपिलवस्तुका मृतकको कोरोना ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’
थर्मल गन कालोबजारी आरोपमा अग्रवाल पक्राउ, घरमा प्रहरीको छापा
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर साढे ७६ हजारको मृत्यु (पछिल्लाे अपडेट)
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा मृत्यु भए स्वास्थ्यकर्मीका परिवारलाई ५० लाख
राष्ट्रिय युवासंघका केन्द्रिय सदस्य गुरुङ्गले गरे गाउँपालिकालाई १ लाख सहयोग